१२ जना थपिए, दुई जनाको मृत्यु – sunpani.com
सुनपानी । ४ आश्विन २०७८, सोमबार मा प्रकाशित
नेपालगञ्ज – बाँकेमा सोमबार १२ जनालाई कोरोना पुष्टि भएको छ ।
जिल्ला कोभिड व्यवस्थापन केन्द्र, बाँकेका अनुसार, तीन वटा ल्याबमा ५६ जनाको परीक्षण गर्दा १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । भेरी अस्पतालमा मात्रै कोरोना देखिएको छ । अन्य दुई वटा ल्याबमा कसैलाई पनि कोरोना देखिएन ।
भेरी अस्पतालमा ३५ जनाको परीक्षण गर्दा १२ जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो । कोहलपुरमा मेडिकलमा १४ जना र बागेश्वरी ल्याबमा ७ जनाको परीक्षण गर्दा कसैलाई पनि कोरोना देखिएन । कोरोना पुष्टि भएका १२ जनामध्ये ६ जना बाँके जिल्ला निवासी रहेका छन् ।
सोमबार ५ जना डिस्चार्ज भएका छन् । जिल्लामा ७४ जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन् ।
यसैबीच, गएराती बाँके र दाङका एक÷एक जना संक्रमितको भेरी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । बाँके खजुरा गाउँपालिका वडा नं. ४ का ७५ वर्षीया महिलाको मृत्यु भएको छ । भदौ २८ गते पीसीआर गरिएका उनलाई २९ गते भर्ना गरिएको थियो ।
दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का ८२ वर्षीय पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ । भदौ १८ गते पीसीआर गरिएका उनलाई १९ गते भेरीमा भर्ना गरिएको थियो ।
योसँगै कोरोनाबाट बाँके जिल्लाका ३ सय ३२ र बाहिरी जिल्लाबाट यहाँ उपचार गराउन आउदा ४ सय १४ जनाको मृत्यु भएको छ ।